Izy io dia afaka mampihena ny habaka sy ny habetsaky ny fonosana raha tsy manova ny endrik'ireo entana ireo. Aorian'ny famonosana compresse, ny fonosana dia fisaka, manify, hamandoana ary porofo vovoka. Mahasoa ny mitahiry ny vola laninao amin'ny fitehirizana sy fitaterana.
Ny famehezana fantsom-baravarankely dia karazana masinina izay mampiasa fantsom-pandrefesana ultrasonic hiasa amin'ilay ampahany amin'ny famehezana ny fitoeran'entana hametahana ilay fonosana.
Ny masinina dia matevina sy marobe. Miaraka amin'ny asa kely latsaky ny 1 cbm, afaka manao ny fizotrany manontolo izy manomboka amin'ny fantsom-bokatra, ny orientation, ny famenoana, ny famehezana, ny fanapahana ny vokatra farany.
Ny tombo-kase FG andiany semi-auto tray dia tombanana amin'ny famokarana sakafo vokatra kely sy salantsalany. Mitahiry vola sy matevina. Ho an'ny vokatra samihafa, tsy voatery atao ny manamboatra fonosana amin'ny rivotra na fonosana amin'ny hoditra.
Ny fitambaran-tsarimihetsika FSG andian-tsarimihetsika dia mihatra amin'ny famokarana sakafo fandroana sakafo noho ny fahombiazany. Azo ovaina izy amin'ny takelaka misy habe sy endrika samihafa. Ary tsy maintsy atao koa ny mampiditra fonosana amin'ny habakabaka novaina, na fonosana hoditra, na samy mitambatra.
Tsotra sy azo antoka, mety tsara amin'ny fametahana fitaovana plastika marobe, toy ny sora-baventy, lamba mifono PVC. Mora manitsy ny manitsy ny ora fanafanana sy ny fotoana maha-mangatsiaka azy. Ary, ny halavan'ny famehezana dia mety ho 1200-6000mm.